Fanatsarana an’Antananarivo : 28 tapitrisa Euros avy amin’ny AFD sy ny UE -
AccueilRaharaham-pirenenaFanatsarana an’Antananarivo : 28 tapitrisa Euros avy amin’ny AFD sy ny UE
15/03/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mitohy hatrany ny tetikasa fanatsarana an’Antananarivo. Omaly mantsy, dia tonga nitsidika ireo toerana nanombohana ny Tetikasa fanatsarana an’Antananarivo (PIAA) teny amin’ireo faritra iva, toa an’Amepfiloha, ny Fitondram-panjakana tamin’ny alalan’ny minisitra eo anivon’ny Prezidansa misahana ny Tetikasan’ny Filoham-pirenena sy ny Fanajariana ny Tany ary ny Fampitaovana (M2PATE), Benjamina Ramanantsoa, sy ny minisitry ny Rano sy ny Angovo Ary ny Akoran’afo (MEEH), Lantoniaina Rasoloelison, niaraka tamin’ny masoivohon’ny Vondrona Eoropeanina (UE), Benedito Sanchez, sy ny masoivohon’i Frantsa, Véronique Vouland, ary ny sekreteram-panjakana Frantsay, Jean-Baptiste Lemoyne, sy ny avy amin’ny Agence Française de Développement (AFD), Bertrand Fichi.
Tamin’izany indrindra no nitondran’ireo teknisianina fanazavana fa nitondra famatsiana ho an’ny tetikasa PIAA mitentina 28 tapitrisa Euros ny AFD, ka ny 3 tapitrisa Euros amin’izany avy amin’ny Vondrona Eoropeanina.
Nambaran’ny minisitra Benjamina Ramanantsoa fa tafiditra indrindra amin’ny tetikasa PIAA ny fanalana ny olan’ny mponina, indrindra ireo eny amin’ny faritra iva rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra. Noho izany, manomboka ny asa amin’izao fotoana izao hitondrana vahaolana maharitra hialana amin’ny tondran-drano amin’ireo faritra maromaro eto an-drenivohitra. “Tsy vao izao mantsy no nitrangan’ny olana eo amin’ny fifehezana ny rano fa efa hatramin’ny andron’ny faha-mpanjaka izany. Amin’izao fotoana izao isika efa miatrika ny fitomboan’ny mponina”, hoy ny minisitra.
Tafiditra amin’io tetikasa io avokoa ny fanamboarana ireo tobi-pitrohan-drano (station de pompage), ny fanamboarana sy fanadiovana ireo lakandrano fivarinan’ny rano, ny lalan-kely, sns.
Voalaza ihany koa fa natao izao tetikasa izao mba hitsenana sahady ny fihitaran’ny tanànan’Antananarivo, izay tafiditra indrindra amin’ny Tetikasan’ny Filoham-pirenena. Izany hoe, tsy maintsy hampifanarahana amin’ny fitombon’ny mponina ny fotodrafitrasa miorina eto Antananarivo, sns.
Ankoatra izay, dia nisy ihany koa ny tafa nataon’ny minisitry ny M2PATE tamin’ireo mpamatsy vola Maorisianina nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenen’i Maorisy. Marihina mantsy fa ny minisitra Benjamina Ramanantsoa no nisolo tena ny Filoham-pirenena tamin’izany. Noho izay indrindra, da nisy kosa ny dinika nifanaovany tamin’ny praiminisira maorisianina sy ireo tompon’andraikitra maro tany an-toerana.